ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ ဒီဘရိုင်းနားတို့ကို အကောင်းဆုံးဂိုးဆုအတွက် ဆွန်ဟောင်မင် အနိုင်ယူ – Sports A2Z
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ ဒီဘရိုင်းနားတို့ကို အကောင်းဆုံးဂိုးဆုအတွက် ဆွန်ဟောင်မင် အနိုင်ယူ
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တစ်ရာသီအတွင်း အကောင်းဆုံး သွင်းဂိုးဆုအတွက်တော့ စပါးစ်အသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဆွန်ဟောင်မင်းက သူနဲ့အပြိုင် ရေပန်းစားနေခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားတို့ကို အနိုင်ယူပြီး ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj
— Budweiser Football (@budfootball) August 13, 2020
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက ဘန်လေနဲ့ပွဲစဉ်မှာ တစ်ကိုယ်တော်အစွမ်းနဲ့ စပါးစ်အသင်းရဲ့ ကွင်းခြမ်းဘက်ကနေ ပြေးလွှားပြီး တစ်ဖက်ကစားသမား ၆ ဦးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ဂိုးသမား နစ်ခ် ပုပ်နဲ့ဆိုရင် ၇ ဦးအထိ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးက ရေပန်းစားထားတဲ့အတိုင်းပဲ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဂိုးအတွက် တောင်ကိုရီးယားတောင်ပံတိုက်စစ်မှူးဟာ ကိုက် ၉၀ လောက် ပြေးလွှားခဲ့ရပြီး ဒီအတွက် ၁၁ စက္ကန့်သာ အချိန်ယူခဲ့ရသလို ခံစစ်သမားတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးစွမ်းရည်ကလည်း ပြောစမှတ်ပြုစရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒီပွဲရဲ့ တတိယမြောက်ဂိုးလည်းဖြစ်ခဲ့ကာ ပွဲအပြီးမှာတော့ စပါးစ်က ငါးဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ ဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲမှာ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေ သွင်းယူခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ ကီဗင် ဒီဘရိုင်းနားရဲ့ အပြင်းကန်ချက်နဲ့ ဝေ့ဝိုက်ကန်ချက်နှစ်ခုကတော့ ဆွန်ရဲ့ ဂိုးကို မကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သလို မဲပေးရွေးချယ်မှုမှာတော့ သူ့ကို မြို့ခံပြိုင်ဘက် အာဆင်နယ်ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူး အီယန်ရိုက်ကပါ ရွေးချယ်မဲပေးသွားခဲ့တာပါ။
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် စပါးစ်တိုက်စစ်မှူးဟာ ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ၁၁ ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီဆုအတွက်တော့ ပြိုင်ဘက် ၉ ဦးကို ကျော်ဖြတ်ရယူသွားခဲ့သလို ဒီဇင်ဘာလကတည်း ဒီသွင်းဂိုးဟာ အကောင်းဆုံးသွင်းဂိုးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံထားခဲ့ရကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
REF: PREMIER LEAGUE
UNICODE: ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ တဈရာသီအတှငျး အကောငျးဆုံး သှငျးဂိုးဆုအတှကျတော့ စပါးဈအသငျးရဲ့ တောငျပံကစားသမား ဆှနျဟောငျမငျးက သူနဲ့အပွိုငျ ရပေနျးစားနခေဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျရဲ့ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈနဲ့ မနျခကျြစတာစီးတီးအသငျးရဲ့ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနားတို့ကို အနိုငျယူပွီး ဆှတျခူးရရှိသှားခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလက ဘနျလနေဲ့ပှဲစဉျမှာ တဈကိုယျတျောအစှမျးနဲ့ စပါးဈအသငျးရဲ့ ကှငျးခွမျးဘကျကနေ ပွေးလှားပွီး တဈဖကျကစားသမား ၆ ဦးကို ကြျောဖွတျပွီးမှ ဂိုးသမား နဈချ ပုပျနဲ့ဆိုရငျ ၇ ဦးအထိ အနိုငျယူနိုငျခဲ့တဲ့ သှငျးဂိုးက ရပေနျးစားထားတဲ့အတိုငျးပဲ ရှေးခယျြခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဂိုးအတှကျ တောငျကိုရီးယားတောငျပံတိုကျစဈမှူးဟာ ကိုကျ ၉၀ လောကျ ပွေးလှားခဲ့ရပွီး ဒီအတှကျ ၁၁ စက်ကနျ့သာ အခြိနျယူခဲ့ရသလို ခံစဈသမားတှကေို ကြျောဖွတျခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးစှမျးရညျကလညျး ပွောစမှတျပွုစရာဖွဈခဲ့ပွီး ဒီပှဲရဲ့ တတိယမွောကျဂိုးလညျးဖွဈခဲ့ကာ ပှဲအပွီးမှာတော့ စပါးဈက ငါးဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈရဲ့ ဘရိုကျတနျနဲ့ပှဲမှာ တနျပွနျတိုကျစဈကနေ သှငျးယူခဲ့တဲ့ သှငျးဂိုးနဲ့ ကီဗငျ ဒီဘရိုငျးနားရဲ့ အပွငျးကနျခကျြနဲ့ ဝဝေို့ကျကနျခကျြနှဈခုကတော့ ဆှနျရဲ့ ဂိုးကို မကြျောလှားနိုငျခဲ့သလို မဲပေးရှေးခယျြမှုမှာတော့ သူ့ကို မွို့ခံပွိုငျဘကျ အာဆငျနယျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး အီယနျရိုကျကပါ ရှေးခယျြမဲပေးသှားခဲ့တာပါ။
အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျ စပါးဈတိုကျစဈမှူးဟာ ဒီရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ ၁၁ ဂိုး သှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး ဒီဆုအတှကျတော့ ပွိုငျဘကျ ၉ ဦးကို ကြျောဖွတျရယူသှားခဲ့သလို ဒီဇငျဘာလကတညျး ဒီသှငျးဂိုးဟာ အကောငျးဆုံးသှငျးဂိုးအဖွဈ ရှေးခယျြခံထားခဲ့ရကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။
၁၄.၈.၂၀၂၀၊ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်၊ သောကြာနေ့။